सफलताको रहस्य | Ratopati
personरातोपाटी exploreकाठमाडौं access_timeजेठ ३१, २०७६ chat_bubble_outline0
एकजना कुशल कलाकारले एक पटक एउटा अमरपक्षीको काष्टमूर्ति बनाउने विचार गर्‍यो ।
काष्टकलाको नियममुताबिक कलाकारले सर्वप्रथम एउटा काठको मुढामा अमरपक्षीको खाका बनायो ।
खाका देखेर एकजना आगन्तुकले हाँस्दै भन्यो, “ए, तिमीले यस्तो खाकाबाट अमरपक्षीको मूर्ति बनाउन खोजेको ? मलाई त यसबाट एउटा कुरुप उल्लूको मूर्ति बन्ला जस्तो लाग्छ !”
अर्को आगन्तुकले भन्यो, “यति ठूलो चुच्चो र यति लामो खुट्टा ! के तिमी पेलिकन पक्षीको मूर्ति त बनाउँदैछैनौ ?”
धेरै आए र धेरै कुरा गरे । कुरा प्रायः खिस्याउने, होच्याउने खालकै थिए । कुनै पनि कुराबाट कलाकार विचलित भएन । आफ्नो काम गर्दै गयो, गर्दै गयो । धेरै समयपछि एकदिन उसको काम सकियो । उसले सफलताका साथ अमरपक्षीको मूर्ति तैयार पा¥यो । मूर्ति एकदमै जीवन्त, तुरुन्तै पंखा फटफटाएर उड्लाजस्तो थियो ।
आगन्तुक तमामले कलाकारको प्रसंसा गरे । धेरै धेरै प्रशंसा गरे । पहिले खिस्याउने गिज्याउनेहरु त झन् चम्कीचम्की प्रशंसा गरे ।